Romania oo xadka Ukraine ku waysan 2 dayuurad dagaal & mid burburkeeda la xaqiijiyey (Daawo) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Romania oo xadka Ukraine ku waysan 2 dayuurad dagaal & mid burburkeeda...
Romania oo xadka Ukraine ku waysan 2 dayuurad dagaal & mid burburkeeda la xaqiijiyey (Daawo)
(Bucherest) 03 Maarso 2022 – Dayuuras Romanian ah oo ah MiG-21 LanceR oo laga kiciyey Saldhig-cireedka 86-aad ee Romania ayaa raadaarka ka qarsoontay iyadoo roondaynaysa gobolka koonfur bari ee Dobrogea shalay casar liiqii, sida ay sheegtay WG dalkaasi.
Waxaa kasii darnayd markii diyaarad kuwa qumaatiga u duula ah oo ah IAR 330 Puma oo loo diray inay raadiso ay iyana burburtay.
Miigga la waayey oo ah noocii uu Soofiyeetku sameeyey 1960-kii balse ay Israel dib u casriyayn ku samaysay ayaa la waayey 15 daqiiqo uun kaddib markii uu duulay isagoo roondaynayey gobol xeebeed xad la leh Ukraine.
Yeelkeede, waxaa heegan la geliyey dad raadiya diyaaradda balse helakabtar la diray ayaa iyana raadaarka ka miriqday 20 daqiiqo kaddib, iyadoo uu markii ugu dambaysey duuliyuhu ka sheeganayey jawiga oo xun.
2 saacadood kaddib ayaa la xaqiijiyey in dayuuradda dambe ay burburtay oo ay ku dhinteen 5-7 qof oo saarrayd, sida uu xaqiijiyey Wasiirka Gaashaandhigga, Vasile Dincu, oo tacsi u diray ehelada dadkii dhintay.
Waxaa lasoo duubay muuqaal tusaya dayuuradda oo laga diray saldhigga Mihail Kogălniceanu Air Base 57 oo holcaysa islamarkii ay dhulka ku dhacday.
Dayuuradda ah MiG-21 LanceR ayaan weli wax wacaal ah laga hayn iyada iyo duuliyeheedii lamana oga inay rideen Ciidamada Ruushka iyo in kale, sidoo kale lama faahfaahin waxa ku dhacay ee ridey helakabtarka raadinaysey.
Previous articleRuushka oo diyaarado dagaal soo geliyey hawada Sweden & miigag loo diray + Sawirro
Next articleMaraykanka oo ku faanay tillaabo ay qaadday Somalia (Arag liis uu soo saaray)